ရှင်းလေ ရှုပ်လေ ရွေးကော် – Ye Htut's Blog
Posted byye htut December 30, 2020 Posted inElection, PoliticsTags:UEC, yehtutarticle
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ဒီနေ့ ( ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ) ရက်နေ့ ရက်စွဲနဲ့ ကြေညာချက် တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ ဒီထုတ်ပြန်ချက်ရဲ့ အဓိက အချက်ကတော့
“ တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်နေတဲ့ မဲစာရင်းမှားယွင်းမှုဆိုတာတွေဟာ အချက်အလက်မှားရင် ပြင်နိုင်ဖို့အတွက် နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လောင်း တွေ ကို PDF ဖိုင်နဲ့ ဖြန့်ဝေထားတဲ့စာရင်းကို အခြေခံပြီးပြောနေတာဖြစ်တယ်။ နိုဝင်ဘာ ၈ရက် နေ့မှာ တကယ်မဲပေးခဲ့တဲ့စာရင်းမဟုတ်ဘူး” ဆိုတာပါပဲ။ ( ပုံ ၁ နဲ့ ၂ )
ဒါပေမယ့် ပြဿနာက ဦးလှသိန်းကော်မရှင်ဟာ ခင်ဗျားတို့ စစ်နေတဲ့စာရင်းက မှားနေတယ်၊ နောက်ဆုံး မဲစာရင်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပေမယ့်
“ တကယ်မဲပေးခဲ့တဲ့ စာရင်းက ဟောဒီမှာ၊ လာယူ၊ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးစမ်း၊ မသမာမှုတွေ့ရင် ပြောစမ်း ” လို့ ရဲရဲ ဝံ့ဝံ့ စိန်ခေါ်မှု မလုပ်တဲ့ကိစ္စပဲ။
ဒီနေရာမှ တပ်မတော်က မဲစာရင်းကို ပြောဆိုခွင့် ၊ စစ်ဆေးခွင့်မရှိဘူး ဆိုရင်တောင် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင် နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်တဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုး နဲ့ အခြားပါတီတွေက စစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုတာကိုတော့ ပြန် ရှင်းသင့်တာပေါ့။ ကိုယ့်ဘက်က ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့သာ သက်သေပြနိုင်ရင် ဘယ်အဖွဲ့အစည်း ကမှ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို မေးခွန်းထုတ်ဖို့မပြောနဲ့ မော်တောင်ကြည့်ရဲမယ် မထင်ဘူး။
တကယ်တော့ တစ်နိုင်ငံလုံးက မဲစာရင်းတွေကို ထုတ်ပြဖို့ မလိုပါဘူး။ အခု အချိန်အထိ တပ်မတော်က ထောက်ပြထားတဲ့ မဲဆန္ဒနယ် ၁၁ နယ်က မဲရုံအလိုက်မဲစာရင်းတွေ၊ မဲလက်မှတ် ထုတ်ပေးထားတဲ့စာရင်းတွေကို PACE လို ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့် လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေ၊ စစ်ဆေးချင်တဲ့ပါတီတွေ၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို ထုတ်ပေးလိုက် ရင် အဖြူအမည်း သဲကွဲသွားမှာပါ။
ဒါပေမယ့် ခက်တာက ရွေးကောက်ပွဲမဲစာရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင် ဦးလှသိန်းကော်မရှင် ရဲ့ ရှင်းလင်းချက် တွေက ရှင်းလေ ရှုပ်လေဖြစ်နေတာပဲ။
မဲပေးခွင့်ရှိသူအရေအတွက်မှာလည်း အစိုးရသတင်းစာတွေမှာ မဲပေးခွင့်ရှိသူ ၃၇. ၂ သန်း ကျော်လို့ ပြောတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးဖော်ပြတဲ့ ရွေးကော်စာရင်းချုပ်မှာတော့ မဲပေးခွင့် ရှိသူ ၃၈. ၂ သန်းကျော်ဖြစ်နေတယ်။ ဝိုင်းပြီးဝေဖန်တော့ ၃၇. ၂ သန်းက ပထမစာရင်းပဲ ရှိသေး တယ်။ စာရင်းမှန်မဟုတ်ဘူး၊ ၃၈.၂ သန်းက အမှန်အကန် နောက်ဆုံး စာရင်း လို့ သတင်းစာမှာ ကြေညာချက်ထည့်ပြီး ပြန်ဖြေရှင်းတယ်။
ဒါပေမယ့် ပြည်နယ်၊တိုင်းအလိုက်မဲပေးခွင့်ရှိသူစာရင်းချုပ်ကို ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်နေ့ သတင်းစာတွေ မှာဖော်ပြတော့ အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်း ၃၈.၂သန်းကျော်မှန်တယ်။ ဒါပေမယ့် ရခိုင်ပြည်နယ် မဲပေး ခွင့်ရှိသူစာရင်းမှာ လေးသိန်း ခုနှစ်သောင်းကျော်ပဲပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်နိုင်တဲ့ မြို့နယ်တွေ က မဲပေးခွင့်ရှိသူတစ်သန်းကျော် စာရင်းထဲမှာပါမလာဘူး။ သူတို့ပါထည့်ပေါင်းရင် မဲပေးခွင့် ရှိသူက ၃၉ သန်းကျော်သွားမယ်။ ( ပုံ ၃ )
အဲဒီလို ရခိုင်က မဲတစ်သန်းကျော်ပျောက်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဦးလှသိန်းကော်မရှင်က ဘာမှ ထပ်ရှင်းတာမတွေ့တော့ဘူး။ တောစကား တောပျောက်ဖြစ်သွားပြီးလား မဆိုနိုင်ဘူး။
အခုလည်း မဲစာရင်း နာမည်ထပ်တဲ့ကိစ္စတွေ နဲ့ပတ်သက်ရင် ဟုတ်တယ်၊ မဟုတ်ဘူး နဲ့ ရှင်းလေ ရှုပ်လေ၊ ကိုယ့်နားရွက်ကိုယ်ပြန်ကြည့်သလို ကြည့်လေ ဝေးလေဖြစ်နေပြန်ပြီ။
မဲစာရင်းသတင်းတွေဖတ်ရင်း ရှင်းအောင်ကတော့ လူတိုင်းလုပ်တတ်တာပေါ့။ ရှင်းတာကို ရှုပ်အောင် လုပ်တတ်ဖို့က မလွယ်ဘူးဆိုတဲ့ စကားပဲ ပြန်သတိရမိတော့တယ်။